Juxa “Puntland taariikh & tabasho-ba waa leedahay” - Caasimada Online
Home Warar Juxa “Puntland taariikh & tabasho-ba waa leedahay”
Juxa “Puntland taariikh & tabasho-ba waa leedahay”
Garoowe (Caasimada Online) – Wasiirkii hore ee arrimaha guddaha Soomaaliya, Cabdi Faarax Siciid ‘Juxa’ ayaa sheegay in deeganada Puntland ah yihiin kuwa kulmistay taariikh balaaran oo si jireen ah, sidoo kalana aan la dabooli karin in gobalkaas uu wax tabanaayo.
Juxa oo ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad doorashada madaxtinimada Puntland ee bisha dambe dhici doonta ayaa isagoo la hadlayay boqolaal shacab ah wuxuu sheegay in hadii la doorto uu shacabka Puntland ku hogaamin doono taariikhdooda, himiladooda, tabashadooda, maqaamkooda iyo miisaankooda.
Cabdi Faarax Siciid ayaa yiri “ Puntland waa gobal leh taariikh iyo tagta dheer, waa gobalkii daraawishtii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan, waa gobalkii Suldaan Maxmed Cali Shire, Boqor cismaankii Baargaal, waa halkii laga aas aasay SYL iyo halgankii gobinmo doonka Soomaaliya”.
Juxa wuxuu qabaa in sidoo kale gobalkaas uu tabasho badan qabo isagoo soo hadal qaaday in 1975 ilaa 1998 uu gobalkaas wax badan tabanayay. Wuxuu amaanay dadkii u istaagay aas aaskii Puntland xili aaney gacanta waxba ugu jirin.
Wuxuu sheegay in hadii la doorto uu ilaalin doono aamanada reer Puntland, waxaana qudbadiisa ka muuqatay inuu yahay nin aad xogogaal ugu ah waxa ay Puntland soo martay iyo waxa ay dooneyso.
Hoos ka daawo muuqaalkaas